RMC INDUSTRIAL corporation umsebenzi umenzi elikhulu-isikali zonke iintlobo amavili zentsimbi kunye namavili aluminium ingxubevange, ekuhlanganiseni uphuhliso kunye nemveliso kunye. iimveliso zethu eziphambili ziquka intsimbi amavili non beadlock, amavili beadlock intsimbi kunye non beadlock amavili aluminium ingxubevange kunye namavili ingxubevange beadlock aluminiyam kwaye amavili, siza singakwazi ukubonelela sinamalungu amaninzi kunye izincedisi kwizithuthi ezahlukeneyo.
inkampani yethu yasekwa ngo-2008, phambi kokuba inkampani esekwe sasisele iminyaka emininzi kwezeMbali kweevili amasondo shishino. Ifunyanwa e Ningbo City kufuphi Shanghai, sinandipha amanzi lula, umhlaba kunye nomoya zokuhamba.
abasebenzi inkampani yethu yonke abaselula kakhulu yaye ngenxa yemizamo abasebenzi yethu yonke, abantu RMC baye ngokuqhubekayo sazama ukuphucula umgangatho imveliso, kwaye ngokuqhubekayo sazama ukuphucula ukulawula siseko yenkampani yethu kunye mbono zobugcisa. amandla yemveliso yonyaka yethu million 2 iivili.
Okwangoku, RMC sele zathunyelwe eMelika, eFransi, Australia, Italy kunye namanye amazwe-20 kunye nemimandla, ngokunjalo, RMC ukunika izimvo zethu ilungiswe kubathengi bethu China. inkampani bethu bebusoloko ingqalelo kuphando, uphuhliso kunye ezintsha, yaye liphuhlise amavili ezininzi ezintsha beadlock kabini leyo esele wabuthela abathengi bethu isithuthi Nissan Y60, Tundra, Jeep, Umzingeli, Jimny, Prado njalo njalo, kwaye unako ukufumana le imoto yethu Igalari. Nemveliso wayilwa ziikomiti zethu Ukudizayina, sihlale ukuba ukwenza uyilo abaninzi ngakumbi ukuhlangabezana abaxumi 'ifuna.
RMC uya kuqalisa isigaba sesibini qhinga sethu sophuhliso. inkampani yethu ngokubhekisele "amaxabiso afanelekileyo, ixesha kakuhle imveliso kunye elungileyo inkonzo yasemva intengiso" njengoko imfundiso yethu. Siyathemba ukuba basebenzisane kunye nabathengi enkulu kuphuhliso efanayo kunye nezibonelelo. Siyazamkela ngabathengi ukuba uqhagamshelane nathi.